Al-Shabaab Oo Saraakiil Ameerikaan Ah Qarax Kula Eegtay Muqdisho | Xaqiiqonews
Al-Shabaab Oo Saraakiil Ameerikaan Ah Qarax Kula Eegtay Muqdisho
Weerar isqarxin ah ayaa lagu soo waramayaa in lala eegtay gawaari sida la sheegay ay la socdeen saraakiil Mareykan ah , weerarka ayaa goor dambe oo khamiista ah ka dhacay meel u dhaw Villa Baydhabo.
Sida ay goobjoogayaal u sheegeen warbaahinta, qaraxa ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac, waxaana dadka waxyeelada gaartay ka mid ah dad shacab ah oo maraayey goobta qaraxa ka dhacay.
Qaraxa ayaa lala beegsaday golonyo ay la socdeen ciidamo Amison ah , waxaana wararka qaar sheegayaan in golonyada ay galbinayeen 2 sarkaal Mareykan ah oo ka tirsanaa shirkadda Pacific Architects and engineers.
Ururka Al-shabaab oo mas’uuliyadda sheegtay ayaa sheegeen in qaraxa uu haleelay bartilmaamoodkooda oo ay ku sharxeen “saraakiil cadaan Mareykanka ah” sida ay warka u qoreen, iyagoo dhanka kale sheegtay in qaraxa uu waxyeeleeyey Ugaandhees ilaalo u ahaa saraakiisha la beegsaday.
Qaraxa ayaa imaanaya maalmo ka dib markii xerada Xalane lagu qabtay shir sida la shaaciyey looga arinsanaayey mustaqbalka ciidanka Amisom oo waqtigooda uu yahay gabaabsi.